BEYONCE, BLUE IVY NXIBA MHLOPHE, DANISA KUNYE EMTSHATWENI - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UBeyonce noBlue Ivy babonwa benxibe ezimhlophe, bedanisa kunye emtshatweni
UBeyonce noBlue Ivy babonwa benxibe ezimhlophe, bedanisa kunye emtshatweni
UBeyonce wabelane ngeefoto zakhe kunye nentombi yakhe uBlue Ivy enxibe iilokhwe ezimhlophe zokudanisa kwaye edanisa kwinto ebonakala ngathi ngumtshato. Ityala: Beyonce / Instagram
Ngu: Kaitlin Jones 11/17/2015 ngo-1: 35 PM
UBeyonce nentombi yakhe uBlue Ivy babetha idolophu ngezinxibo ezimhlophe qho, benza ukuba ubukho babo bwaziwe kwinto eyayibonakala ingumtshato womhlobo kule mpelaveki iphelileyo.
Ukujonga njenge-1940s femme fatale ngokuhambelana no-Lana Turner kunye no-Ava Gardner, u-Beyonce uthumele ifoto yakhe yokuqala kuthotho lomsitho womtshato kwi-Instagram yakhe ngenye imini eyadlulayo. I-selfie ibonisa ukuba imvumi ephumelele amabhaso kwiGrammy ijonge ubuhle bemidlalo yeenwele ezinde ezimnyama kunye nemilebe ebomvu ebomvu.
Ifoto ethunyelwe nguBeyoncé (@beyonce) ngo-Novemba 15, 2015 ngo-6: 12 pm PST
Kodwa ungavumeli i-noir yefilimu ibonakale ikhohlisile. Nangona uNksk. Carter wayejongeka njengesiqhushumbisi-kunye nefoto yakhe yesibini engenamfanekiso embonisa ngengubo yakhe emhlophe negolide embindini wengqwalaselo kwisihlwele - wayengekho kumsitho wedwa. Umhla wakhe wokuthandana yayiyintombi yakhe, uBlue Ivy.
Isitayile sokutshatisa umama wakhe oyimbonakalo, intombi kaBeyonce uBlue Ivy wayenxibe ilokhwe emhlophe eneenkcukacha zegolide kulo msitho. Kwifoto yakhe yokugqibela abelane ngayo, umama nentombi yakhe babonwa bedanisa phakathi kweendlela phakathi kwetafile ezingenanto kunye nezitulo, bebambene ngezandla apha endleleni.
Ifoto ethunyelwe nguBeyoncé (@beyonce) ngo-Novemba 15, 2015 ngo-6: 50 pm PST
Akukho mntu ungaziwayo ukuba unxibe yonke into emhlophe kwimicimbi esesikweni, uBeyonce, uBlue Ivy, uJay-Z kunye nalo lonke iqela lemigulukudu yakwaKnowles kunye neendwendwe ezinxibe iinjini kwibala elicocekileyo nelicolekileyo lomtshato kadade wabo uSolange uSolange eNew Orleans kunyaka nje ophelileyo.
Abantu abasandul 'ukutshata uSolange Knowles kunye no-Alan Ferguson bahamba noJay-Z noBeyonce emva komtshato wabo ngo-Novemba 16, 2014 eNew Orleans, eLouisana. Ityala: UJosh waqhekeza / iWiredImage
Mhlawumbi okuphawuleka ngakumbi ngala mini yayiyingubo yomtshato eyahlukileyo kaSolange- iinguqu ezi-6 zeewadi ezimhlophe ezibandakanya ibhulukhwe emhlophe enesicoci esaneleyo esiboniswe ngentla esiza nokugcwalisa ikapa! Nangona umhlophe ubonakala uyintandokazi kwaba dade baculayo badumileyo kunye neentsapho zabo, isipho sokuqala somtshato sikaSolange asifikanga ngombala omhlophe, kodwa luhlaza okwesibhakabhaka kumyeni wakhe, umlawuli uAlan Ferguson.
UFerguson wanika uSolange izihlangu ezivulekileyo zemeyile ezibonakala ngathi zenziwe ngelaphu eliluhlaza okwesibhakabhaka apho umtshakazi obhiyozelayo wabhala kwi-Instagram yakhe yokubhala, Ekuphela kwendlela awayenokukwazi ngayo ukunxiba izihlangu zesikhumbuzo, yayikukubandakanya enye yeePie zikaPatti, Ukubhekisa kwimvumi zomphefumlo uPatti LaBelle ezisandul 'ukwenziwa.
Ekuphela kwendlela awayenokukwazi ngayo ukongeza ezi zihlangu zesikhumbuzo, yayikukubandakanya enye yeePies zikaPatti….
Ifoto ethunyelwe nguSolange (@saintrecords) nge-15 ka-Novemba ngo-2015 ngo-5: 39 pm PST
Kukhangeleka ngathi bobabini oodade bakwaKnowles bebebhiyoza ngesimbo kunye neentsapho zabo kule mpelaveki, kwaye sinqwenela uSolange isikhumbuzo sokuqala esimnandi!
Uyilo lwesithandathu seminyaka imibono yesipho
Amakhaya esitayile se-acadian
Ibala elingasemva elinendawo yomlilo
izipho zomyeni ngekrisimesi
Ukucwangcisa i-honeymoon ukuya kwi-hawaii
Kim kardashian ixabiso lengubo yomtshato
camo imitya yomtshato yakhe